Shina: Tetikasa Ao Amin’ny Atetineto Entina Hanampiana Ireo Mararin’ny Pneumoconiose · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Marsa 2012 4:22 GMT
Ny Pneumoconiose dia aretina maherivaika mahazo ny havokavok'ireo mpiasa vokatry ny fifohana vovoka. Araka ireo antontan'isa ofisialy navoakan'ny governemanta Sinoa, tamin'ny 2010, olona 676.541 no hita fa nararin'ny pneumoconiose ary amin'izy ireo dia olona 149.110 no maty vokatr'io aretina io. Ny salan'isan'ny fahafatesana tamin'izany dia niakatra ho 22.04%.
Mety ho mbola goavana noho izany ny loza tena izy naterak'io aretina io, satria dia tsy nailika tsy ho anatin'ireo antontan'isa mikasika ny aretina mahazo ny mpiasa ireo ny mpiasa mpifindra monina avy any ambanivohitra izay sady tsy voaaron'ny rafitra fiarovana sosialy ihany koa.
Natsangana ny tetikasa fanampiana iray nataon'ireo mpampiasa aterineto , “Love Save Pneumoconiosis” ny tapaky ny taona 2011 ary vao haingana dia namokatra lahatsary iray ho fisoloana vava io vondrona io mba hanazavana ny raharahan'ireo mararin'ny Pneumoconiose any ambanivohitra any Shina (jereo eto ambany).
Nandika teny ireo soratra mandady amin'io lahatsary io ny Acopy.net. Eto ambany ny teny fampidiran'io lahatsary io:
Vondronà iray manokana, mpiasa mpifindra monina avy any ambanivohitra : mpitrandraka, mpiasa amin'ny fananganana trano, mpiasa amin'ny tonelina ary mpitsabo aretin-tsaina.
Asa sy vovoka. Niara-niasa ho an'ny fandriampahaleman'ny tanàna tamin'ny hatsembohany izy ireo.
Mandoa ny sandan'ny tranontsika tsara tarehy amin'ny fahatanorany izy ireo
. Tokony homena fankasitrahana am-pifaliana izy ireo, nefa ny nofinofiny tsara indrindra dia ny hahafahany miaina mifoka rivotra.
Ny nofinofin'izy ireo dia ny hamelomany ny ankohonany. Mba hanatanterahany izany nofinofy izany, nandao ny tanindrazany izy ireo ary nizotra nankany amin'ireo toerana fananganana sy fitrandrahana ambanin'ny tany…
Ilay mpanangom-baovao sy mpamotopototra malaza Wang Keqin avy any Beijing no lehiben'io tetikasa io. Nanazava [zh] ny hevitra fonosin'ny firotsahany hanao izany izy tao anatin'ny bilaoginy tamin'ny Desambra 2011:
Mararin'ny pneumoconiose iray any Gansu. Sary nalaina tao amin'ny bilaogin'i Li Keqin.
Maro ireo olona manontany ahy, ry mpampianatra Wang, maninona ianao no toa mazoto ery hanavotra ireo mpiasa any ambanivohira izay mararin'ny pneumoconiose ? Tsotra ny valinteniko: raha tsy nisy io rafitry ny fanandinana eny amin'ny anjerimanontolo io, mety ho lasa mpiasa mpitrandraka arintany aho ary mety ho lasa iray amin'ireo mararin'ny pneumoconiose, miady hanavotra ny aiko.
Rehefa mandà tsy handray ny andraikiny ireo orinasa, minia tsy mijery ny olana ireo sampan-draharahan'ny governemanta, raha misy iray tsy manam-bola hitsaboan-tena nefa te hiaina — Manantena aho fa [raha tamin'izany toerana izany aho] hisy olona hanampy ahy sy hanafaka ahy amin'ny fangejan'ny devoly.
Amin'ny maha-mpanao gazety ny tenako, nahita izany teny “pneumoconiose” izany aho rehefa nanao fitateram-baovao tamin'ny tapaky ny taona 1990. Niasa tao amin'ny Gansu Economic Daily aho tamin'izany fotoana. Mikasika adinà tompona toby iray fitrandrahana arintany izany tantara izany. Nitafatafa tamin'ilay Tale Lefitr'io fitrandrahana io, Old Huang, ny tenako. Tsy nitsahatra nikohaka izy nandritra ny tafatafa ary niteny ahy fa aretin'ny havokavoka vokatry ny asa avy amin'ny vovoka ao anatin'io toby fitrandrahana io izany, ankehitriny fantatra amin'ny anarana hoe pneumoconiose.
Taona vitsy taty aoriana, niantso ahy ny mpiara-miasa taminy ary niteny ahy fa maty sempotra noho ny peumoconiose i Old Huang.
Efa fotoana maharitra izao, mbola mijanoona ato an-dohako ny endrika miramiran'i Old Huang.
Avy eo tamin'ny 2009, mbola nanintona ny saiko indray ny pneumoconiose. Ny Desambra, nahazo antso avy tamina mpitatitra any Gansu aho izay niteny fa mihoatra ny 100 ireo mpiasa mpifindra monina any ambanivohitra no mararin'ny pneumoconiose. Ny sasany maty ary ny hafa kosa dia marary mafy. Nikatsaka ny hisintona ny sain'ny media ireo mpiasa mpifindra monina ireo nefa tsy afaka nitatitra izany raharaha izany ny media tao an-toerana. Nanantena izy ireo fa afaka ny hanampy ny tenako.
Nandefa mpanadihady tany Gansu i Wang mba hitatitra io raharaha io. Na teo aza anefa izany, ts afaka nanampy ireo marary, izay an-dalàm-pahafatesana izany tatitra izany. Maty tsirairay ireo natao fanadihadiana tamin'ny 2010. Nanapa-kevitra ny hanisaka ny fitaterany ho ao amin'ny sehatra fiadin-kevitry ny media sosialy ao amin'ny Weibo i Wang mba hanintona ny sain'ny vahoaka tamin'ny Desambra 2010, ary maro ireo mpampiasa aterineto no nihetsika avy hatrany mba hanampiana:
Ny 25 Desambra , nankany Gulang ireo mpampiasa aterineto anisan'izany ny ‘Beijing Chef‘ sy ireo hafa. Maro ireo mpampiasa aterineto hafa no nanaraka azy ireo. Miaraka, nanomboka ny ‘Hetsika ho an'ny Rahalahy Tambanivohitra Voan'ny Pneumoconiose any Gulang’.
Nanokatra kaonty fangatahana fanampiana tety anaty aterineto i Beijng Chef sy ireo mpirotsaka an-tsitrapo hafa ary nifandamina mba handefasana marary iray any amin'ny Trano Fitsaboana ao He any Beidai mba hahazo ny “fitsaboana fanadiovana tanteraka ny havokavoka”.
Teo ambanin'ny famoretan'ny hevi-bahoaka dia nanome toky ny Birao Fiahiana ara-tsosialy, faritanin'i Gansu, tanatina fanadihadian'ny media iray fa hampiasa ireo vola 6 tapitrisa [RMB] fampiasa vonjimaika izy ireo mba hanampiana ireo marary.
Nanao fampielezan-kevitra hangatahana fanampiana ihany koa ny tanànan'i Wuwei ao amin'ny faritanin'i Gansu teny anivon'ireo mpiasam-panjakana ary nahazo tapitsisa RMB vitsivitsy. Taorian'ny fetiben'ny lohataona, voapotsitry ny hevi-bahoaka, nanome fanampiana 11 tapitrisa [RMB] ny governemantan'i Gansu mba hanohanana ny fitsaboana ireo mararin'ny pneumoconiose any Gansu.
Natsangan'ny China Social Assistance Foundation tamin'ny Jona 2011, fanamafisana ny ezaka tsy tapaka ataon'ireo mpampiasa aterineto amin'ny fanampiana ireo mararin'ny pneumoconiosis any Shina io tetikasa “Love Save Pneumoconiosis” io. Mampiasa ny Weibo io tetikasa [zh] io hanangonam-baovao momba ireo mararin'ny pneumoconiose any amin'ny faritra ambanivohitra sy hitaterana ny asan'io tetikasa io sy ny fandaniana.